သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာနှင့်လူမှုမီဒီယာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုဘယ်လိုပေါင်းစည်းမလဲ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 28, 2013 တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 10, 2013 Jayson DeMers
၎င်းသည်ခေတ်၏အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာ"နှင့်" အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး။ " ဘယ်နေရာကိုမဆိုအလှည့်ကျမကြာခဏဆိုရလျှင်သင်ကြားရမည့်အရာဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်အကြောင်းအရာများသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအကောင်းဆုံးရှာဖွေနိုင်သည့်အစောဆုံးကတည်းကအွန်လိုင်းစျေးကွက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကဂူဂဲလ် algorithm ကိုအသစ်ပြောင်းခြင်းများနှင့်အတူ ပန်ဒါနှင့်ပင်ဂွင်း, အစိုင်အခဲအကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာပို။ ပင်အရေးကြီးသောဖြစ်လာသည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းအရာသည်ကုမ္ပဏီများစွာအတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနေရာရှိဝက်ဘ်ဆိုက်များအကြောင်းပြောနေရုံမျှသာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွမ်းကျင်စွာထုပ်ပိုးထားခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်စွာထုပ်ပိုးထားခြင်းနှင့်လူမှုရေး - မီဒီယာအတွက်ကောင်းမွန်သောအရာများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကြီးများနှင့်အသေးစားစွန့် ဦး တီထွင်သူများအတွက်အရာများကိုပြုလုပ်ပေးသည်။
ပါဝင်သည့်မဟာဗျူဟာသည်သက်ရှိထင်ရှားဖြစ်ပြီးဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ကန်သည်။ ၎င်းသည် SEO ဘလော့ဂ်ဆောင်းပါးများစွာ၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ငါတွေ့သောလူအများစု - ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပါ ၀ င်သူများ - သူတို့၏လူမှုလမ်းကြောင်းများအတွက်အကြောင်းအရာဗျူဟာကိုမစီစဉ်ကြဘူး။ လူများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုတမူထူးခြား။ ထုပ်ပိုးထားသောအရာများ (မကြာခဏဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အခြားနေရာများတွင်တွေ့ရသောအကြောင်းအရာများကို“ မျှဝေခြင်း” အတွက်ဖြစ်သည်ဟူသောယုံကြည်ချက်မှထွက်ပေါ်လာခြင်း) ကင်းမဲ့သည်ဟုမကြာခဏမှတ်ယူကြသည်ဆိုသော်လည်း၎င်းသည်မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာလှုပ်ရှားမှု / အားထုတ်မှုအတွက်မဆိုအံ့ဖွယ်ရာများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာတွင်ပါဝင်ခြင်းသည်ခက်ခဲသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ရိုးရှင်းသောဘလော့ဂ်တစ်ခုအတွက်အကြောင်းအရာတည်းဖြတ်မှုကိုဖန်တီးရန်အရင်းအမြစ်များစွာလိုအပ်သည်။ အကြောင်းအရာများကိုဆိုရှယ်မီဒီယာသို့သွားရန်မည်သူမဆိုအချိန် (နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ပိုက်ဆံ) ကိုအဘယ်ကြောင့်သုံးချင်သနည်း။ ကျနော်တို့လင့်ခ်နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုမျှဝေဖို့ပဲမဟုတ်လော
သင်၏လူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှု၏အများစုမှာစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသော၊ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဝေမျှခြင်း၊ အသုံးပြုသူများကိုကူညီသည့် status များသို့မဟုတ်တွစ်တာများကိုတင်ခြင်း၊ စာဖတ်သူများ / နောက်လိုက်များအားစသည်တို့ပါဝင်သင့်သည်။ ဤအတွက်အကြောင်းအရာများသည်အဓိကအားဖြင့်“ ရင်းမြစ်” ဖြစ်သည်။ ကိစ္စရပ်များ။ ပါဝင်တဲ့မျှတတဲ့နည်းဗျူဟာရှိတယ်။ ပြီးတော့မဟာဗျူဟာမျှသာမဟုတ်ဘဲဆိုရှယ်မီဒီယာအတွက်ပင်“ အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာ” ရှိသည်။ သင်၏လူမှုမီဒီယာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများမည်မျှကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်အချက်သုံးချက်သည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
လူမှုမီဒီယာပါဝင်မှုသည်စုဆောင်းရန်သာရည်ရွယ်သည် လူမှုရေးအချက်ပြမှုများ ဂူဂဲလ်အတွက်တော့ဒါကသိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ၎င်းသည် click-throughs များကိုမောင်းရုံသာမဟုတ်ပါ။ အားလုံးသောအရာများသည်“ တက်ကြွသော” ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာတစ်ခုရှိရန်အတွက်အကြောင်းအရာဗျူဟာကိုသုံးရုံသာမဟုတ်ပါ။
ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုမောင်းနှင်သင့်သည်။ ဤသည်အမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်, လူကြိုက်များနှင့်ယုံကြည်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်သင်၏လူမှုမီဒီယာအကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာပေါ်တွင်မူတည်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ကောင်းသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ကျယ်ပြန့်စွာကွဲပြားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၌ရှိနေသောနယ်ပယ် / စျေးကွက်အပေါ် မူတည်၍ ပြောရန်လွယ်ကူသော်လည်း၎င်းကိုစွန့်ခွာသော်လည်းဆိုရှယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာအများစုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခြေခံကျသော်လည်းအရေးကြီးသောအတွေးအခေါ်များရှိသည်။
“ NOW” အတွက်အသင့်တော်ဆုံးအကြောင်းအရာများကိုရွေးချယ်ပြီးထုတ်ပြန်ပါ။လူတွေကအချိတ်အဆက်တွေအများကြီးစုဆောင်းပြီးလူမှုရေးမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကတဆင့်သူတို့ကိုစီစဉ်ကြတယ်Hootsuite သို့မဟုတ် Buffer ။ ဤအရာသည်အဆင်ပြေသော်လည်းသင်မျှဝေထားသောအကြောင်းအရာသည်သက်ဆိုင်မှုရှိရုံသာမကလက်ရှိအခြေအနေကိုလည်းသေချာစေပါ။
သူတို့ကိုအရသာလုပ်ပါဖြေ - တိုတောင်းတဲ့အချိတ်အဆက်ပါတဲ့ပျင်းစရာကောင်းတဲ့၊ တစ်ကြောင်းတည်းသောပို့စ်များသည်သင့်နောက်လိုက်များ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်ဂူဂဲလ် + တို့ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များတွင်သင့်တင်ပို့ချက်များသို့သက်ဆိုင်ရာပုံများထည့်ပါ။ ယင်းတို့ကသူတို့ကိုထင်ရှားစေပြီးလူများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်သည်။ ၏အခြေခံသဘောတရား အာရုံစူးစိုက်မှု - စိတ်ဝင်စားမှု - Desire လူမှုမီဒီယာတွင်သင်တင်ထားသည့်အရာနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအရာကိုမမေ့ပါနှင့် လှုပ်ရှားမှု! အမြဲတမ်း call-to-action ကိုအသုံးပြုပါ။
ထူးခြားရှင်းလင်းသော၊ ရိုးရှင်းသော်လည်းသံလိုက်ခေါင်းစဉ်များနှင့်ဖော်ပြချက်များကိုရေးပါ။ လူမှုဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုစီတွင်လူ ဦး ရေကွဲပြားမှု (သို့) လူနေမှုပုံစံစသည်တို့ရှိသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်လူအများစုသည်မှတ်ချက်များမှမပါ ၀ င်ကြပါ။ (အစားစာမူအများစုအတွက် "ကြိုက်" ခြင်းသည်သူတို့တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းအတာဖြစ်သည်) တွစ်တာတွင်၊ တွယ်တာမှုနှင့်ပြန်ကြားချက်များမှတဆင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းနိုင်သည်။ ဂူဂဲလ် + ၏အသိုင်းအဝိုင်းသည်အခြားနေရာများထက် ပို၍ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုဖြစ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ သို့သော်သင်၏လူမှုရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုစီ၌သင်တင်ထားသည့်ပုံစံကိုသင်မည်သို့ပုံသွင်းသည်အပေါ်မူတည်သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်လင့်များတင်ရန်အတွက်သာမဟုတ်ကြောင်းနားလည်ထားပါ။ ပြီးနောက်၊ Digg လည်းမဟုတ်ပါ။ သင်လင့်များတင်ရန်နှင့်ရွှေ့ဖို့အဲဒီမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ထိရောက်သောလူမှုမီဒီယာကြိုးပမ်းမှုအကြောင်းပါ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖန်တီး။ သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်လျှင် - သူတို့ကိုဝေမျှရန်၊ ပြန်လည်ရေးရန်၊ ပြန်ကြားရန်၊ မှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ဆွေးနွေးရန်စတင်စေပါ အဲဒါဟာဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခုအဖြစ်ပျံ့နှံ့သွားတယ် - ခင်ဗျားတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာကြိုးပမ်းမှုတွေကအကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။
Social Media သည်သင် / သင်၏စီးပွားရေး / သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုတိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်
လူမှုမီဒီယာသည်သင်၏စီးပွားရေး / ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်သီးခြားရပ်တည်သည့်သီးသန့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုကိုတည်ဆောက်ပြီး၊ ၎င်းကိုအသွားအလာနှင့်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကြိုးစားနေပါကသင်၏လူမှုမီဒီယာကြိုးပမ်းမှုများသည်ယိုယွင်းပျက်စီးသွားခြင်းမရှိကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်
“ social media အားထုတ်မှု” အားဖြင့်ငါသည်ပရိသတ်များ၊ နောက်လိုက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောကြိုက်နှစ်သက်မှုများရှိသောတက်ကြွသောလူမှုရေးပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ပြောနေရုံသက်သက်မဟုတ်ပါ။ ငါတကယ်ပြောနေတာက
အစုရှယ်ယာများ၊ retweets များနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအခွင့်အလမ်းများပိုမိုများပြားသည်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကြီးများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုပေါက်ကွဲစေနိုင်သော ROI ဖြင့်ဆွဲဆောင်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းအရာသည်အတားအဆီးမရှိသောကြော်ငြာအတွက်နောက်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာ is အလုပ်လုပ်နေတယ် ထို့အပြင်၎င်းသည်နောက်ကွယ်တွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာလိုင်းများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအစိုင်အခဲအကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။
bandwagon ကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်သွားပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆူညံသံတွေကြားမှာအသံကိုမြဲမြံအောင်လုပ်ဖို့သေချာပေါက်ခက်ခဲမှာသေချာတယ်။
Tags: အကြောင်းအရာစျေးကွက်အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationseoလူမှုမီဒီယာလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်
Jayson DeMers သည်တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သည် အီးမေးလ်, သင်၏ဂျီမေးလ်သို့မဟုတ် G Suite အကောင့်နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးသင်၏အီးမေးလ်လှုပ်ရှားမှု - သို့မဟုတ်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းကိုမြင်သာစေသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကိရိယာတစ်ခု။ သူ့ကိုအပေါ်ကိုလိုက်နာပါ တွစ်တာ or LinkedIn တို့.
Tweet ရှာသူ။ နောက်လိုက်နောက်ကိုရှာပါ